Golden Ninja - Online
घर » रक्षा » Golden Ninja
खेल जानकारी: Golden Ninja
विवरण: अघि बढाउन र सकेसम्म धेरै क्षेत्रहरु जित्न, रातो Ninjas सामना गर्न बल प्रयोग र तिनीहरूलाई पराजित क्रममा शत्रु क्षेत्रहरूमा हावी यो निन्जा सुन समर्थन
खेल्नु: 54,889 ट्याग: ninja, निन्जा खेलहरू
एक उत्कृष्ट beat-em-up आर्केड खेल। हङकङको सडकमार्फत आफ्नो बाटो लड्नुहोस्।
किशोर उत्परिवर्ती निंजा कछुए पिज्जा क्वेस्ट
किशोर उत्परिवर्ती निंजा कछुए सबै दुश्मनों संग लडने को लागि एक साथ काम गर्न को लागी छ। किशोर उत्परिवर्ती निंजा कछुए पिज्जा क्वेस्ट र मजा लिनुहोस्।
बनाम निन्जा शक्ति रेंजरों कछुवा परम नायक मतभेद 2
सबैलाई मनपर्ने नायक सबै-बाहिर brawl मा कार्य फिर्ता छन्! Nickelodeon अनलाइन खेल लड, पावर Rangers बनाम Teenage उत्परिवर्ती निन्जा कछुवा गर्न sequel मा वरिपरि toughest मार्शल कलाकार विरुद्ध आफ्नो लड कौशल परीक्षण: उल
lego ninjago स्टार वार्स एक्का आक्रमण 2
LEGO Ninjago स्टार वार्स ऐस आक्रमण 2।
LEGO खेल प्ले LEGO खेल! तपाईं LEGO स्टार वार्स खेल ऐस आक्रमण2मा ग्यालेक्सी गरेको सर्वश्रेष्ठ लडाकु पायलट प्रमाणित! आफ्नो चरित्र छान्नुहोस् आफ्नो अनुकूलित, र आफ्नो लडाकु जहाज चयन! गोमा घन्टा
किशोर उत्परिवर्ती निन्जा शक्ति रेंजरों परम नायक मतभेद2बनाम कछुवा
Nickelodeons नवीनतम अनलाइन खेल लड मा toughest मार्शल वरिपरि कलाकार विरुद्ध आफ्नो लड कौशल परीक्षण। बनाम पावर Rangers परम हिरो मतभेद किशोर उत्परिवर्ती निन्जा कछुवा रमाइलो अनलाइन कार्य खेल, खेलाडी टोलीमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ जो छ
किशोर उत्परिवर्ती निन्जा प्रतियोगिताको लडाकू कछुवा
प्रतियोगिताको Fighters - TMNT। किशोर उत्परिवर्ती निन्जा कछुवा प्रतियोगिताको Fighters। किशोर उत्परिवर्ती निन्जा कछुवा प्रतियोगिताको लडाकू एक रेट्रो आर्केड लड को TMNT ब्रह्माण्डको देखि नायक र खलनायक सुविधा खेल हो। 1 खेलाडी मोड वा TOU भाग
nickelodeon फुटबल स्टार
Nickelodeon फुटबल कलाकार छिटो-paced अनलाइन फुटबल Spongebob, Teenage उत्परिवर्ती निन्जा कछुवा, Korra को कथा, संजय र क्रेग र Breadwinners आफ्नो मनपर्ने वर्ण अभिनय खेल हो। Spongebob, पैट्रिक, Donatello, माइकलएन्जेलो रूपमा प्ले,
nickelodeon बास्केटबल तारा
Nickelodeon बास्केटबल कलाकार छिटो-paced अनलाइन बास्केटबल Spongebob, Teenage उत्परिवर्ती निन्जा कछुवा, संजय र क्रेग र हार्वे Beaks आफ्नो मनपर्ने वर्ण अभिनय खेल हो। Spongebob, पैट्रिक, Donatello, माइकलएन्जेलो, रफएल, Sanj रूपमा प्ले
ninjago खसेको निन्जा
पापी Ninjas हाम्रो खेल, हाम्रो गहिरो तहखाने मा कैद टोएमासिना उपाधि Ninjas उद्धार गर्न प्रयास गर्नेछ। हाम्रो Ninjas स्पेसबार प्रयोग हाम फाल्ने गर्नुपर्छ र तपाईं पर्खालहरु मा अगाडि बढ्न प्रयास गर्नुपर्छ। रमाइलो गर..
प्ले मुक्त Ninjago Ninjaday अनलाइन खेल। आफ्नो मित्रहरुलाई यो Ninjago Ninjaday खेल साझेदारी गर्नुहोस्।
ninjago सम्पत्ति lego
प्ले lego Ninjago पोसेसन र Ninjago खेल साझेदारी आफ्नो Facebook मित्र!
दुष्ट Djinn Nadakhan आकाश मा Djinjago आफ्नो संसारमा पुनर्निर्माण गर्न NINJAGO द्वीप को भागहरु चोरी भएको छ। जे रूपमा खेल्ने तपाईं उसलाई र आकाश समुद्री आफ्नो गिरोह चोरी मुलुकमा र rebu फिर्ता लिन Zane, Nya, लोयड, कोले र काई उद्धार गर्न विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ
ninjago निन्जा कोड
निन्जा कोड निन्जा कोड मा Digiverse प्रविष्ट गर्नुहोस्! डिजिटल अधिपति को Ninjago शहर mainframe भ्रष्ट छ। शत्रु वाहन मा Hack र तिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नै रूपमा प्रयोग गर्न निन्जा गरेको टेक्नो ब्लेड प्रयोग गर्नुहोस्। संघर्ष गर्न काई, Zane, कोले, र जे बीच चयन
पौराणिक निन्जा लडाई - ninjago खेल
Legendary निन्जा लडाई मा निन्जा सबैभन्दा ठूलो शत्रु लडाई! काई, कोले, जे, Zane, र लोयड सबै शक्तिशाली छन् निन्जा, तर एक Ninjago मा सबै भन्दा राम्रो निन्जा पहनाया गर्न सकिन्छ। पत्ता लगाउन गर्ने तिवारी दावी हुनेछ महाकाव्य मालिक लडाई को एक श्रृंखला मार्फत प्ले
ninjago: चार बाटो
को Ninjago खेल चार पथ मा मौलिक शक्ति र Spinjitzu मास्टर! डज झिल्काहरू र मात्रा चिसो पहाड आफ्नो निन्जा कलालाई तिखार्ने! को Ninjago देखि चार निन्जा रूपमा खेल: Spinjitzu को मास्टर्स!
यो साँप को वृद्धि लड्न। खेल Spinjitzu Snakedown मा! यो Hypnobrai एक गाउँ हमला गर्दै छन्। छनौट कोले, जे, काई वा Zane Ninjago देखि: Spinjitzu को मास्टर्स र केही गम्भीर Serpentine पुच्छर बर्खास्त! निन्जा-गो!
को nindroids को ninjago वृद्धि
उहाँले पहिले नै निकै पुरानो र कमजोर छ किनभने sensei वू दुष्ट शक्तिहरूको द्वारा कब्जा गरिएको छ। अब आफ्नो चेलाहरूले दासत्वबाट उहाँलाई जारी गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। को Sensei को होलोग्राम केही सुझाव आफ्नो बाटो मा Ninjas मदत गरिरहेको छ - तिनीहरूलाई ध्यान पढ्नुहोस्।
ninjago जंगल साहसिक
यो खेलमा, काई थप शक्ति किन्न, आफ्नो गुरु उद्धार गर्न उसलाई सडकमा सबै राक्षस मार्ने मदत र सिक्का सङ्कलन छ।
एक पौराणिक ninjago लडाई
छैन कुनै पनि अवरोध डराएका गर्ने सबै भन्दा शक्तिशाली व्यक्ति, हामी हेर्दै छौं। अरे! तिमी त्यहाँ छौ? आफ्नो सबै भन्दा राम्रो निन्जा छनौट र बलियो ड्रागन लडाइँ! तर पहिलो, जितको लागि आफ्नो बाटो मा सबै शत्रुहरूलाई मार्न। हामीलाई थाहा छ तपाईं यसलाई के हुनेछ भनेर। कार लिन
सकेसम्म टावर्स रूपमा माथि प्राप्त गर्न निन्जा कौशल प्रयोग गर्नुहोस्। कि बाटो मा हो अवरोध र शत्रुहरू लागि बाहिर हेर्नुहोस्।
lego ninjago - ड्रागन पहाड
प्ले यो मध्यकालीन lego खेल। को Catapult प्राप्त गर्नुहोस्, र कली मान्छे को लागि खेलकुद र सुन सङ्कलन, महल विरुद्ध गोली।
को घन्टी को lego प्रभु
मध्य धरती लागि अन्तिम ठूलो युद्ध लडेका हुन लागेको छ। जहाँ तिनीहरूले अन्तमा पावर को रिङ नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ Frodo र शमू माउन्ट डुम नजिकै छौं र यसलाई साथ गाढा प्रभु Sauron, तर समय तिनीहरूलाई विरुद्ध छ। शत्रुलाई आक्रमण W विरुद्ध रक्षा गर्नुपर्छ
ग्रह एक्स21/2 देखि ninjago आक्रमण
यो ग्रह X2 1/2 देखि एक आक्रमण हो! तपाईं विदेशी आक्रमणकारिहरुमा रूपमा विदेशी रक्षा एकाइ रूपमा मानवता सुरक्षित गर्न वा earthlings अपहरण गर्न् मदत गर्नेछ?
ninjago सांप खुबै lego
तपाईं मार्शल आर्ट र रोचक साहसिक चाहनुहुन्छ? त्यसैले तपाईं यो खेल जस्तै हुनेछ! तपाईं एक साहसी निन्जा बन्न र तिमीलाई मार्न प्रयास गर्ने शत्रुहरू को छालहरू संग लड्न मौका छ। त्यसैले तपाईं कार्य कठिन हुनेछ। तपाईं जीत पर्याप्त कुशल हुनुहुन्छ?
किशोर उत्परिवर्ती निन्जा अन्धकार शहर कछुवा
लियोनार्डो आफ्नो मित्र उद्धार गर्न जा रहेको छ, आफ्नो बाटो मा उहाँले निन्जा सडक अवरोध गर्न चाहन्छ भेटे। गरौं गरेको लियोनार्डो को निन्जा मार्न र तिनका साथीहरूले उद्धार गर्न आफ्नो विशेष सीप प्रयोग गर्दछ।
ninjago Marvel lego: परम माकुरा मानिस
प्ले lego Marvel: परम स्पाइडर मैन अनलाइन - 3D मा उत्कृष्ट साहसिक खेल जो तपाईं स्पाइडर धेरै खतराबाट जोगिन मदत र आफ्ना शत्रुहरूको विरुद्ध लड्न पर्छ। जानुहोस्, स्लाइड र रोक बिना आफ्नो cobwebs जारी! कति टाढा जान सक्षम हुनेछ
किशोर उत्परिवर्ती निन्जा कछुवा: अन्तिम स्लाइस - tmnt
पिज्जा अन्तिम स्लाइस लागि यसलाई संघर्ष। केवल दुई कदम: ब्लक र आक्रमण।2खेलाडी मोड समावेश गर्नुहोस्। यो समय अधिकार प्राप्त र पिज्जा जीत। किशोर उत्परिवर्ती निन्जा कछुवा: अन्तिम टुक्रा - TMNT
lego निन्जा कछुवा
के तपाईं साँचो निन्जा हुन् भनी प्रमाणित गर्न तयार हुनुहुन्छ? त्यसपछि लियोनार्डो, रफएल, Michaelangelo र Donatello सामेल र मास्टर Splinter संग एक वास्तविक निन्जा प्रशिक्षण छन्। आज Ninjas आफ्नो रोमांचक मा उपयोगी हुने केही नयाँ चाल सिक्नुपर्छ, र y
ninjago गोप्य कुञ्जी
कृपया मद्दत काई को Z कुञ्जी प्रयोग अवरोध हटाउन, घर सुरक्षित फर्किन हिउँ पहाड पास चलाउन।
ninjago गोप्य कोड
यो साहसी Ninjas आफ्नो भूमि कब्जा गर्न चाहन्छ जसले दुष्ट अधिपति सामना गर्न जाँदैछन्। तपाईं क्रममा आफ्नो बाटो मा तिनीहरूलाई मदत गर्न सक्छौं तिनीहरूले खलनायक पराजित र हे द्वारा कब्जा गरिएको थियो जो आफ्नो मातृभूमि र आफ्ना साथीहरूलाई बचाउन व्यवस्थापन सक्ने
डिज्नी नायक स्टिकर रक्षक
गेट रक्षा गर्न स्टिकर डिफेन्डर प्रयोग स्टिकर!
phineas र ferb पिछवाडे रक्षा
पिछवाडे रक्षा। मदत Phineas र Ferb लाश देखि पिछवाडे सुरक्षा!
भाग्यशाली टावर 2
तपाईं सारा राज्यमा सबै भन्दा राम्रो सैनिक हुन् भनेर देखाउने र राजा को नाम मा मिशन मा जानुहोस्। आफ्नो मिशन खलबल्याउन आफ्नो बाटो हुनेछ जो राक्षस र आदिवासीहरूले लडाइँ।
को avengers गामा राक्षस बनाम को avengers: पृथ्वीको mightiest नायक
यो Avengers पद गामा राक्षस को Avengers: धरती गरेको Mightiest हीरो।
गामा राक्षस आक्रमण ढाल मुख्यालय रक्षा!
आकाशगंगा को संरक्षक र आकाशगंगा रक्षा
ठाउँ मार्फत उडान गर्दा, अभिभाबकहरुको ambushed छन्! मदत तारा-प्रभु र रकेट पायलट को मिलानो र शत्रु जहाज नष्ट, र त्यसपछि एड्रियानडेग्रूट, Drax र Gamora हार Korath, नेबुला र Ronan मदत टाउको-गर्न-टाउको लडाई मा। आकाशगंगा Defen को संरक्षक
mixels तीखो दांत गिरोह
Mixels फेंग गिरोह।
निःशुल्क Mixels खेल, फेंग गिरोह खेल र अन्य ठूलो Mixels खेल खेल्न
chima को दन्त्यकथा: chima रक्षा
Chima रक्षा: Chima को दन्त्यकथा। Chima खेल संग रमाइलो छ!
नौकर रक्षा Gotham
खलनायक को Gotham शहर शहर बचत गर्न चमेरो मानिस मद्दत गर्नुहोस्। जब डाकुओं को खोज मा शहर वरिपरि र Rummage तिनीहरू सबै अपराध शहर अन्त राख्न नौकर तिनीहरूलाई blows धेरै हिट देखा गर्छन्
सागर सुरक्षित Spongebob
यो खेलमा, Spongebob र seahorses राक्षस सागर आक्रमण किनभने समुद्र रक्षा। मदत Spongebob र आफ्नो मित्रहरू राक्षस गोली, सागर मा प्राप्त गर्न
तपाईंको सानो घर रक्षा
नदी, दूषित थियो जनावर गएका mad.Some प्रेत आफ्नो सानो घर गर्न तिर चलिरहेको फलाउँछ। टाढा जाने! मेरो घर नजिक प्राप्त नगर्नुहोस्! आफ्नो हतियार टिप्न, को प्रेत आफ्नो सानो घर नजिक भालू रोक्न! आफ्नो हतियार अपग्रेड भूल छैन!
साहसिक समय: ध्वनि महल
यो साहसिक समय करो संग महल रक्षा
अघि बढाउन र सकेसम्म धेरै क्षेत्रहरु जित्न, रातो Ninjas सामना गर्न बल प्रयोग र तिनीहरूलाई पराजित क्रममा शत्रु क्षेत्रहरूमा हावी यो निन्जा सुन समर्थन
BART Simpsons रक्षा
Barts शत्रु आफ्नो आधार हमला गर्दै छन्। BART उहाँले पायो सबै शक्ति प्रयोग गरेर ती शत्रु फिर्ता गोली हुनेछ। BART BART रक्षा टुक्रयाउनु अघि सबै शत्रु तल गोली मद्दत गर्नुहोस्।
ट्रान्सफर्मर Autobot शरणस्थान एलजी द्वारा एक टावर रक्षा खेल हो। तपाईं deceptions रोक्न शहर रक्षा गर्नुपर्छ।
Mecharon 2: बचाउको
यो शीर्ष तल शूटिंग खेल मूल को एक remake छ। पछिल्लो Mecharon बच्न बाहिर छ। तपाईं शत्रु योद्धाहरू सबै छालहरू बन्द लड्न पर्छ। के तपाईं बाँच्न वा मर्न यदि तपाईं निर्धारण।
महाकाव्य युद्ध 3
महाकाव्य युद्ध श्रृंखला को सबै भन्दा महाकाव्य प्रविष्टि। बोर्ड मा हरेक ठाउँ जित्न युद्ध मा आफ्नो विरोधीको हार। निर्माण र आफ्नो डेक उन्नयन, एक रणनीति हो, आफ्नो महल सुरक्षा, र आफ्नो बाटो खडा गर्ने सबै नाश!
पनि फिर्ता 60s मा तिनीहरूले अनौठो प्रेत infestation संघर्ष। सहरमा रक्षा सहायता र bitten प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुहोस्!
बेन 10 विदेशी सधैंभरि रक्षा
यो सधैंभरि Knights फिर्ता त्यहाँ पुरानो चाल हो। सहायता बेन, वेन, र केविन तिनीहरूलाई विरुद्ध रक्षा।
सुपर मारियो रक्षा
सुपर मारियो रक्षा सुपर मारियो खेल मा एक टावर रक्षा लिन छ। तपाईं विभिन्न वस्तुहरू क्षेत्र मा, सुपर मारियो खेल मा शत्रुहरू आधारित महल गर्न पाइरहेको देखि मारियो र Luigi क्लोन को छालहरू रोक्न क्रममा ठाँउ। ITE दायरा
रणनीति रक्षा 3.5 खेल
प्रयास र आफ्नो आधार पराजित तिनीहरूले तपाईंको पराजित पहिले शत्रु आधार सही एकाइहरु पठाउनुहोस्।
ओबामा र लाश
राष्ट्रपति ओबामा रूपमा आफ्नो स्थिति रक्षा। को लाश गोली, र बन्दुक, र खोज्ने मा अंक खर्च।
डिफेन्डर को एटलान्टिस
Aquaman तपाईं आवश्यक! Aquaman काला कैन्यन को दुष्ट शक्तिहरूको देखि एटलान्टिस रक्षा मद्दत गर्नुहोस्।